Wax Ka Baro Cudurka Lafo Xanuunka (Fibromyalgia) - iftineducation.com
iftineducation.com – Fibromyalgia waa lafo iyo murqo xanuunka ugu caansan markii laga reebo riixa “Osteoarthritis”.
Badanaa xanuunkaan waxaa lagu qaldaa xanuunnada kale sida riixa, roomaatiisamka iyo lafa xanuunnada kale.
Waxaa kaloo cudurkaan la socon karo calaamado kale sida daganaansho la’aan, daal, tabardarri, welwel, diiqo, iyo socodka caloosha oo isbadasha (saxaro adeeg ama shuban).
Cudurka fibromyalgia wuxuu u badan yahay haweenka oo in ka badan 80% wuxuu ku dhacaa dumarka u dhaxeysa da’dooda 35 ilaa 55 sano.
cudurka kuma badno caruurta yaryar iyo dadka da’da ah.
Waxaa cudurka lagu gartaa kaliya cabashada bukaaanka iyo wiisito-muuqaaleed “physical examination”.
Diraasadii ugu dambeysan waxay sheegtay in maskaxda meel ku taalla oo loo yaqaanno “Insula” in ay ka dambeyso xanuunkaan fibromyalgia, weliba baaritaanno ayaa socda.